Penny Stock Trading အတွက် ကုန်သွယ်မှု2လမ်းညွှန် 2022 ခု လေ့လာပါ။ - ဇွန်လ 2022 ကုန်သွယ်မှုလေ့လာပါ။
Penny စတော့အိတ်ချိန်းတွင်2ကုန်သွယ်မှု 2022 လမ်းညွှန်ကိုလေ့လာပါ။
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်:7ဇွန်လ 2022
ပဲန်နီစတော့များသည်ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာအောက်သာရှိသောကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ သီအိုရီအရ၎င်းတွင် NYSE နှင့် NASDAQ ကဲ့သို့သောစတော့အိတ်ချိန်းများတွင်စာရင်းပြုထားသည့်အကြီးစားကုမ္ပဏီအမြောက်အများပါဝင်နိုင်သည်။ သို့သော်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ Pink Sheets များကဲ့သို့အဝေးမှ (OTC) စျေးကွက်များတွင်ရောင်းဝယ်သောအသေးစားကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။
ပဲန်နီစတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုကိုမကြာခဏဆိုသလို 'စွန့်စားမှုမြင့်မားသော၊ မြင့်မားသောဆုလာဘ်' အဖြစ်အပျက်အဖြစ်မကြာခဏမှတ်ယူတတ်ကြသည်။ အကြောင်းမှာတစ်ပြားမှရှယ်ယာများသည်မတည်ငြိမ်မှုနှင့်ငွေဖြစ်လွယ်မှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Penny စတော့အိတ်ချိန်းရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာ Learn2Trade 2022 လမ်းညွှန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သိထားသင့်သည်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြထားသည်။ ၎င်းတွင်တစ်ပြားမှတစ်ပါးသိုလှောင်ထားသောပမာဏ၊ စျေးကွက်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့်ယနေ့အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရန်သင်ဘာလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရရင်တော့တစ်ပြားတစ်ပြားကို Securities and Exchange Commission (SEC) ကအစုရှယ်ယာဈေးနှုန်းကိုဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာနှင့်အောက်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရလျှင်၊ တစ်ပြားမှတစ်ပါးအခြားသောရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုနယ်ပယ်တွင်အခြားမည်သည့်ကုမ္ပဏီနှင့်မျှမတူပါ။ ဆိုလိုသည်မှာကျယ်ပြန့်သည့်အယူအဆသည်နောင်အနာဂတ်တွင်တန်ဖိုးတိုးလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်တစ်ပြားတစ်ချပ်ကိုဝယ်ယူရန်ဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ စတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီများနှင့်ပိုမိုသင့်လျော်သောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် Pink Sheets ကဲ့သို့သော OTC ဈေးကွက်တွင်စာရင်းဝင်သည့်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုသိရှိနိုင်သည်နှင့်အမျှ OTC ဖလှယ်မှုသည်လက်လီကုန်သည်များအတွက်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့်တတိယပါတီပွဲစားကိုသင်သွားရန်လိုလိမ့်မည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, တစ်ပြားမှစတော့ရှယ်ယာရိုးရာအပြာရောင် - ချစ်ပ်ကုမ္ပဏီများမှသူတို့ကိုခွဲခြားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများအစုရှိသည်။ အရေးကြီးသည်မှာတစ်ပြားမှသာအစုရှယ်ယာများသည်များသောအားဖြင့်အသေးစားစျေးကွက်အရင်းအနှီးရှိသောကုမ္ပဏီငယ်များဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ စနီ၏ဈေးနှုန်းသည်အလင်းရောင်ဖက်ရှင်ဖြင့်မြင့်တက်သွားနိုင်သည်။ cryptocurrencies ကဲ့သို့သောမှန်းဆပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများထက်ပင် ပို၍ များသည်။
ကြီးမားသောအလားအလာရှိသောအလားအလာ - အကြီးစားမဖြစ်လာမီကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ
Penny စတော့ရှယ်ယာများသည်များသောအားဖြင့် OTC စျေးကွက်တွင်စာရင်းဝင်သည် - ၎င်းသည်လက်လှမ်းမီရန်ခက်ခဲစေသည်
Penny Stocks ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
သီအိုရီအရဆိုလျှင်တစ်ပြားမှတစ်လုံးသည်အများပိုင်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ သို့မှသာသူတို့သည်ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှငွေရှာနိုင်လိမ့်မည်။ သို့သော်တူညီချက်ရပ်တန့်နေရာဖြစ်သည်။ ဥပမာ - မကြာသေးမီကဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာသော Uber စာရင်းကိုစဉ်းစားပါ။
စီးပွါးခွဲဝေရေးကုမ္ပဏီသည် SEC ၏အကြီးစားဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အရင်းအနှီးများမြှင့်တင်ရေးတွင်ပါ ၀ င်ရန်အသေးစိတ်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်စတော့အိတ်များကိုကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းပြုစုခဲ့သည် - NYSE ။
ဒါကပဲန်နီစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီများအတွက်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်ကနေနောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ပြားတစ်ချောင်းမျှ IPO လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သော်လည်းအမျိုးသားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းသူများ၏စစ်ဆေးမှုကိုမူမည်သည့်နေရာမျှမတွေ့ရပါ။ တကယ်တော့အသစ်စက်စက်စာရင်းသွင်းထားသောစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီများသည် SEC ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ရကြသည်။
အဓိကကျသောအချက်မှာ NYSE သို့မဟုတ် NASDAQ ကဲ့သို့သောအဓိကလဲလှယ်မှုနှင့်ဆန့်ကျင်။ တစ်ပြားမှတစ်ပါးသည် OTC ဈေးတွင်ကုန်သွားလိမ့်မည်။
တစ်ဒေါ်လာစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်၎င်း၏ IPO ကိုပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဒုတိယစျေးကွက်သို့ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။ Layman ၏စည်းမျဉ်းအရဤသည်ကိုဆိုလိုသည်မှာရှယ်ယာရှင်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏အစုရှယ်ယာများကိုလဲလှယ်ခြင်းဖြင့်ရောင်းချနိုင်သည်။ ထို့နောက်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက ၀ ယ်နိုင်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် OTC စျေးကွက်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
OTC Market ဆိုတာဘာလဲ။
အရံငွေ (သို့မဟုတ်) OTC စျေးကွက်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားရိုးရာလဲလှယ်မှုပြင်ပရှိငွေကြေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ ဤကဏ္inတွင်အဓိကကစားသမားနှစ် ဦး မှာပုဂ္ဂလိကပိုင် Pink Sheets နှင့် OTC Bulletin Board တို့ဖြစ်သည်။
နယ်ပယ်နှစ်ခုစလုံးတွင်တူညီသောအရာတစ်ခုရှိသည် - ကုန်သွယ်ရေးနေရာမရှိ။ ယင်းအစားအရောင်းအ ၀ ယ်များသည်ပွဲစားအချင်းချင်းအကျိုးဆောင်ခြင်းအပေါ်တွင်မူတည်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အတန်ငယ်မရှင်းလင်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေရာဖြစ်လာသည်။
တနည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင်သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်တွင်ထိုင်။ တစ်ပြားမှတစ်လုံး၏တန်ဖိုးများကိုတစ်စက္ကန့်လျှင်တက်ပြီးကျဆင်းသွားခြင်းကိုမမြင်နိုင်ပါ။ အဲဒီအစား၊ ပုံမှန်အားဖြင့်တယ်လီဖုန်းမှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သည်။
ပန်းရောင်စာရွက်များတွင်မကြာသေးမီကစာရင်းဝင်ခဲ့သောတက်လာမည့်အ ၀ တ်အထည်ကုမ္ပဏီအကြောင်းသင်ဖတ်ရှုရသည်
Pink Sheets သို့တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်နိုင်သောစတော့ပွဲစားတစ် ဦး ကိုသင်တွေ့ပြီးသင်အစုရှယ်ယာဒေါ်လာ ၁၀၀၀ တန် ၀ ယ်လိုကြောင်းအသိပေးသည်
အစုရှယ်ယာများအားနောက်ဆုံးရောင်းဝယ်သည့်အခါ၎င်းတို့သည်စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၀.၁၀ နှုန်းဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်
ပွဲစားသည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအချို့ပြုလုပ်ပြီးကုန်သွယ်ရေးကိုဖုံးအုပ်ရန်တစ်ပြားပါးပါးကိုင်ဆောင်ထားသည့်ပွဲစားတစ် ဦး ကိုတွေ့သည်
ပွဲစားကသင့်ကိုစတော့ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၀.၁၅ ဒေါ်လာပေးဖို့ပြောတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ကုန်သွယ်မှုထက် ၅၀% ပိုများတယ်
အထက်ပါဥပမာမှသင်မြင်နိုင်သည်အတိုင်း, တစ်ပြားမှတစ်ပါးရှယ်ယာ parabolic နှုန်းမှာရွေ့လျားနိုင်ပါတယ် - အနည်းဆုံးအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရှယ်ယာကိုင်ဆောင်သူများမကြာခဏသူတို့အဘို့အသူတို့အဘို့အရောင်းချရန်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်နိုင်သည်!
Penny စတော့ရှယ်ယာ အကြောင်းပြချက်များစွာဖြင့် Apple၊ IBM နှင့် Facebook ကဲ့သို့သော blue-chip ကုမ္ပဏီများနှင့် လုံးဝကွဲပြားသည် - အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီများသည်များသောအားဖြင့်အရင်းအနှီးများမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည့်ကုမ္ပဏီအသစ်များဖြစ်သည်။ သူတို့သည်လမ်းပေါ်ရှိဘဏ်များသို့မဟုတ်အကျိုးတူအရင်းအနှီးကုမ္ပဏီများကဲ့သို့ရိုးရာလမ်းကြောင်းများကိုမကြာခဏမသုံးနိုင်ကြသောကြောင့် OTC စျေးကွက်များသို့ပြောင်းလဲသွားကြသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္healthာရေးကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်ယင်း၏ဒါရိုက်တာတစ် ဦး ကြောင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာများမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်မှာချက်ချင်းဆိုသလိုသတိပေးခေါင်းလောင်းသံကိုဖော်ပြသင့်သည်။
Liquidity သည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ တူရိယာတစ်ခု၏ ကုန်သွယ်မှုပမာဏကို ရည်ညွှန်းသည်။ Facebook၊ Amazon နှင့် British American Tobacco ကဲ့သို့သော အကြီးစားကုမ္ပဏီများသည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ တန်ဖိုးရှိသော ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။ ဤသည်မှာ cryptocurrency အတွဲများကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။ BTC / အမေရိကန်ဒေါ်လာ.
သို့သော်တစ်ပြားမှသာစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီများသည်နေ့စဉ်ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဒေါ်လာထောင်သောင်းချီတန်ရုံမျှသာရှိလေ့ရှိပြီးရလဒ်အနေဖြင့်အလွန်နည်းပါးသောငွေဖြစ်လွယ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းတို့ကိုသင်ဝယ်ယူပြီးလျှင်သင်၏ရှယ်ယာများရောင်းချရန်ခက်ခဲနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
ဤကိစ်စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာလေ့လာသူကုန်သည်များအနေဖြင့်သူတို့၏တစ်ပြားတစ်ချပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ကိန်းဂဏန်းများနှစ်ဆသို့မဟုတ်သုံးဆတိုးလာသည်ကိုတွေ့ရသောအခါအလွန်စိတ်လှုပ်ရှား။ ၀ ယ်သူကိုရှာမတွေ့သည့်အခါစိတ်ပျက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၎င်းတို့အားတစ်ပြားတစ်ချပ်ကိုစျေးကွက်သတ်မှတ်ထားသည်ထက်သိသိသာသာနိမ့်သောဈေးဖြင့်ရောင်းရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေကြသည်။
ဒါကိုမမှားပါနဲ့၊ ရိုးရာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနေရာတွင် NYSE သို့မဟုတ် NASDAQ တွင်ဖော်ပြထားသောအဓိကကုမ္ပဏီများသည်တစ်နေ့လျှင်ရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ဖြင့်တက်သို့မဟုတ်တက်သွားတတ်သည်။
ဆန့်ကျင်တွင်, တစ်ပြားမှစတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းများကိုမကြာခဏနှစ်ဆသို့မဟုတ်သုံးဆဂဏန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုမြင်လိမ့်မည်။ ဤသည်ကတစ်ပြားမှစတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုကိုအလွန်အန္တရာယ်များသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမော်တော်ယာဉ်စေသည်။
မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုသင်ရောင်းဝယ်ပါစေ၊ ငွေဖြစ်လွယ်မှုနှင့်ပြန့်ပွားမှုများအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုအမြဲရှိလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အလွန်အမင်းအရည်ပိုင်ဆိုင်မှုများ ရှေ ထို့အပြင် S&P 500 သည်ရေလုံမှုန့်များရရှိခြင်းမှအကျိုးရရှိလိမ့်မည်။
Cryptocurrency နေရာတွင် Bitcoin သည်အပြိုင်အဆိုင်အများဆုံးပြန့်ပွားမှုများမှအကျိုးခံစားနေစဉ် ERC-20 ဒင်္ဂါးများသည်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်တစ်ပြားမှသာစတော့ရှယ်ယာပလက်ဖောင်းများသည်ဤမျှနည်းပါးသောငွေဖြစ်လွယ်မှုကြောင့်ခံစားနေရသောကြောင့်ပြန့်ပွားခြင်းသည်မကြာခဏနက္ခတ္တဗေဒသဘောတရားများဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ, သင်ဝယ်ယူစျေးနှုန်း $ 0.22 ရှိသောအသစ်တစ်ခုကို Penny စတော့ရှယ်ယာအပေါ်သင်၏မျက်စိရှိသည်ဟုဆိုပါစို့။ သင် ၀ ယ်ယူသည်နှင့်တပြိုင်နက်စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုတွင်ရောင်းဈေးဒေါ်လာ ၀.၁၆ ရှိကြောင်းသင်တွေ့ရှိရလိမ့်မည်။
ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်အရဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အမှာစာကိုမှာလိုက်သည် ပျံ့နှံ့ 27.27% ၏! ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အနည်းဆုံး ၂၇.၂၇% ကိုအနည်းဆုံး ၂၇.၂၇% ရရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ငွေပမာဏကိုပင်ချိုးဖျက်နိုင်သည်။
သင့်တွင်ကုန်သွယ်မှုပမာဏနည်းခြင်းနှင့်ငွေဖြစ်လွယ်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်မှုမြင့်မားခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့ခြင်းတို့ရှိသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည် 'pump and dump' အစီအစဉ်အတွက်များစွာအထောက်အကူပြုသည်။
တစ်ပြားတစ်ချပ်တွင်စျေးကွက်အရင်းအနှီးဒေါ်လာ ၅၅၀,၀၀၀ ရှိသည်ဟုဆိုပါစို့။
တစ်ဖန် Penny စတော့ရှယ်ယာများ၏ဈေးနှုန်းသည်လျင်မြန်စွာတက်လာပြီး FOMO (Fear of Missing Out) ဟုလူသိများသည်။
မမျှော်လင့်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကတစ်ပြားမှတစ်ပါးရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်နှင့်အမျှမူလမကောင်းသောသရုပ်ဆောင်များသည်သူတို့၏ရှယ်ယာများကိုအမြတ်အစွန်းကြီးများဖြင့်အမြတ်ထုတ်လိမ့်မည်။
အရေးကြီးသည်မှာသင်သည်တစ်ပြားမှကုန်ပစ္စည်းများကိုအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သောအခါအလွန်သတိထားရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်မှန်ကန်လွန်းလွန်းသည်ဟုထင်ရလျှင်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်။
Ford Motors, Disney, Nike နှင့်အခြားထောင်ပေါင်းများစွာကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီကြီးသည်အဓိကစတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းဝင်သောအခါအများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန်သတင်းအချက်အလက်သိသိသာသာရှိသည်။ အမှန်မှာ၊ ကုမ္ပဏီများသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုဘဲတတိယပါတီများနှင့်အဓိကဖြစ်ရပ်များကိုဆွေးနွေးခြင်းသည်တရားမ ၀ င်ပါ။
ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ချင်းစီသည်တူညီသောအခွင့်အရေးကိုရရှိထားကြသည်။ ဒီထက်ပိုပြီးဘာမဆိုလုပ်ရန်နှင့်ကုမ္ပဏီသည် 'အတွင်းလူကုန်သွယ်ရေး' ပိုင်နက်ထဲ ၀ င်ရောက်နေသည်။
သို့သော် - တစ်ပြားမှရှယ်ယာများ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, OTC ဖလှယ်မှုတွင်စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများနှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်နီးပါးမျှမရှိသလောက်ရှိပါတယ်။ အကြောင်းမှာကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုပုံမှန်မွမ်းမံရန်တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်မရှိပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့် OTC စျေးကွက်များအတွင်း၌ဗဟုသုတရှိသူများသည်ထူးခြားသောအားသာချက်ရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်သည့် Power Plug ကို ၂၀၁၃ တွင်ဒေါ်လာ ၀.၁၅ ၀ န်းကျင်ဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။ နောက်မတ်လတွင်အမြန်ဆုံးတက်နိုင်ပြီးကုမ္ပဏီကအမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုဒေါ်လာ ၁၀.၃၁ အထိရရှိခဲ့သည်။
Monster Beverage ကုမ္ပဏီသည်ပိုမိုကြီးမားသောအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်က၎င်း၏ရှယ်ယာများကို ၀.၆၃ ဒေါ်လာဖြင့်သာရောင်းချခဲ့သည်။ Monster Beverage ကုမ္ပဏီသည် NYSE တွင်ဒေါ်လာ ၇၂ ဒေါ်လာဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏အစောပိုင်းကာလများတွင်ကုမ္ပဏီကိုကျောထောက်နောက်ခံပြုသူများကထိုဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ ဤသည် 1995% ကျော်တစ် ဦး တိုးကိုယ်စားပြုတယ်။
ထိုအခါသင်သည် US တစ်လျှောက်လုံးတွင်ချည်နှောင်မှုများစွာရှိသော BJ ၏စားသောက်ဆိုင်များကိုတွေ့ရသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၀.၈၈ ဖြင့်သာရောင်းဝယ်ခဲ့သော်လည်းရှယ်ယာတစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၅၀ ကျော်အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကုမ္ပဏီသည်ဒေါ်လာ ၂၀ မှ ၂၅ အထိရှိသောဒေသသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပင်!
ပဲနန်စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုသည်သင်အန္တရာယ်များကိုအပြည့်အဝနားမလည်ပါကသင်ကြိုးစားသင့်သည့်အရာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုစိတ်ထဲ ထား၍ အောက်တွင်သင်လမ်းတစ်လျှောက်၌သင့်အားကူညီရန်အသုံးဝင်သောအကြံဥာဏ်များကိုတွေ့လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်အသေးစားကုမ္ပဏီများကိုပြန်လှည့်ပါကအလွန်နိမ့်သောလောင်းကြေးများဖြင့်စတင်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ စတော့ရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုးနိမ့်သောကြောင့်သယ်ဆောင်ရန်မလိုပါ။ ၎င်းအစားကြီးမားသောတစ်လုံးတည်းသောပမာဏကိုထည့်ပေါင်းခြင်းထက်သေးငယ်သောတိုးတက်မှုများ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ သင်အများဆိုင်ဒိုမိန်းတွင်ရရှိနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ မရေမတွက်နိုင်သောနာရီပေါင်းများစွာအချိန်ယူရလိမ့်မည်။ အချက်အလက်မရှိခြင်းကြောင့်သင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဟုသင်ခံစားရလျှင်၊ ကုမ္ပဏီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သင်ရှောင်ရှားသင့်သည်။
အစုရှယ်ယာအနည်းငယ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတွင်သင်သည်တတ်နိုင်သလောက်အမျိုးမျိုးကွဲပြားရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မင်းကဒေါ်လာတစ်ထောင်ကိုတစ်ပြားထဲထည့်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ပြောပါရစေ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်အစား၊ ကုမ္ပဏီ ၅၀ ကိုဒေါ်လာ ၁၀၀ စီဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်၊ အနီးနားရှိ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ အမှိုက်ပုံကြီး၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို သင်ခံစားရမည်မဟုတ်ပါ။ အရာများကို နောက်တစ်ဆင့်သို့တက်လှမ်းရန်၊ လုပ်ငန်းမျိုးစုံသို့ ကွဲပြားစေရန်လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ဥပမာအနေနဲ့ ပါဝင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုဖို့ စဉ်းစားပါ။ ဆီ နှင့် ဓါတျငှေ့အဝတ်အစား၊ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာ၊ ငွေကြေး၊ လက်လီ၊ နှင့် အခြားအရာများ။
၄။ Penny Stock Trading ကျွမ်းကျင်သူများကိုရှောင်ပါ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ most အများစုသည်“ ကျွမ်းကျင်သူများ” ဟုခေါ်ဆိုခံရခြင်းမှဝေဒနာခံစားရသော်လည်း၊ ပို၍ တိကျစွာပြောရလျှင်အင်တာနက်သည်ကျွမ်းကျင်သောကုန်သည်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ သူတို့ကနောက်ထပ်တစ်ပြားတစ်ပြားကိုကောက်ယူရန် 'လျှို့ဝှက်ဆော့စ်' ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ယင်းသည်သူ့ဟာသူအတွက် pump and dump အစီအစဉ်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွမ်းကျင်သူဟုခေါ်သောကျွမ်းကျင်သူများကလူအများအားသူတို့၏စတော့ရှယ်ယာအနိမ့်အမြင့်မှာမဝေးတော့သည့်အနာဂတ်တွင်ပေါက်ကွဲလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်လျှင်၎င်းသည်စျေးကွက်ကိုထိန်းချုပ်ရန်လမ်းခင်းပေးလိမ့်မည်။
သင်၏ရွေးချယ်ထားသည့်စတော့ရှယ်ယာပွဲစားများအပေါ်တွင်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ နောက်ဆုံးတွင် OTC စျေးကွက်များသို့တိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်ပွဲစားများသည်အများပြည်သူမသိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစိတ် ၀ င်စားလိမ့်မည်။ ဒါကသူတို့ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ယောက်အနေနဲ့သင့်အပေါ်ထူးခြားတဲ့အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်စေတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, အာကာသအတွင်းနှစ်ရှည်လများသမိုင်းကြောင်းရှိသူတစ် ဦး ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ပွဲစားနှင့်အတူသာသွားပါ။
အကယ်၍ သင်သည်လူသစ်ကုန်သည်ဖြစ်လျှင်၊ စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့်ထိတွေ့ရန်သင်၏အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားသင့်သည်။ ၎င်းသည်မတည်ငြိမ်မှုမြင့်မားခြင်း၊ ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ငွေအလုံအလောက်မရှိခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည် - တစ်ပြားတစ်ချပ်မှရသောစတော့ရှယ်ယာသည်အတွေ့အကြုံမရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အထောက်အကူမဟုတ်ပါ။ သင်ကထိုးနှက်ချက်ကြီးကြီးမားမားရှိလိုရင်တောင် Pink Sheets နဲ့ OTC Bulletin Board ကိုလက်လီကုန်သည်တစ်ယောက်အနေနဲ့လက်လှမ်းမီဖို့အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မယ်။
ဒါကိုစိတ်ထဲထားခြင်းအားဖြင့်၊ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတော့ကို တန်ဖိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ CFDs ရိုးရာသဘော။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် အဓိကစတော့အိတ်ချိန်းတွင် စာရင်းသွင်းထားသော်လည်း၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ရှယ်ယာစျေးနှုန်း $5 ထက်နည်းသရွေ့ SEC မှ တစ်ပြားတစ်ချပ်စတော့အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်ကို မမေ့ပါနှင့်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ စတော့ရှယ်ယာ CFD ပွဲစားများသည် သင့်အား 'တစ်ပြားမှရှယ်ယာများ' သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ သို့သော် စည်းမျဉ်းခံပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသည်။
ထို့အပြင်လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်း ၀ င်ထားသောစတော့များကိုရောင်းရန်သင်ဆုံးဖြတ်ပါက၎င်းကုမ္ပဏီများသည်ရှယ်ယာစျေးနှုန်းများသည်ဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာအောက်သာရှိသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗြိတိန်စတော့ဈေးကွက်ကပေါင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးသူ့ရဲ့ရှယ်ယာတွေကိုရှယ်ယာဈေးတက်တာကြောင့်ပဲ။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော OTC စျေးကွက်များ၌တစ်ပြားမှရှယ်ယာများ ၀ ယ်ယူရန်ကြိုးစားခြင်းထက်စတော့ရှယ်ယာ CFD များကိုရွေးချယ်ခြင်း၏အားသာချက်များကိုဖော်ပြထားသည်။
စတော့ CFD ပွဲစားများသည်ကုန်သွယ်ခွင့်လိုင်စင်ရှိရမည်။ Learn2Trade မှကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့် (၂) အလောင်းများမှလိုင်စင်ရသည့်ပွဲစားများကိုသာအကြံပြုခြင်းအားဖြင့်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုလှမ်းသည်။
ဤသည်များ၏အကြိုက်ပါဝင်သည် FCA (ယူကေ)၊ ASIC (သြစတြေးလျ), CySEC (ဆိုက်ပရပ်စ်) နှင့် စရဖ (စင်ကာပူ) တို့ ဖြစ်သည်။ အခြားသော စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း အကာအကွယ်များကြားတွင်၊ အဆင့် ၁ လိုင်စင်အဖွဲ့များသည် စတော့ CFD ပွဲစားများသည် ဖောက်သည်များကို သီးသန့်ဘဏ်စာရင်းများတွင် သိမ်းဆည်းထားရန် တောင်းဆိုသည်။
CFD ပွဲစားတစ် ဦး ကိုသင်အသုံးပြုသည့်အခါခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်အဓိက (အမေရိကန်၊ ယူကေ၊ ဂျပန်) နှင့်အသေးစား (Australiaစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ဂျာမနီ) စသောအပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုများကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ရွေးချယ်ထားသောကုမ္ပဏီကိုသင်၏ Desktop (သို့) မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် ၀ ယ်နိုင်၊ ရောင်းနိုင်လိမ့်မည်။
OTC စျေးကွက်များ၌တစ်ပြားမှတစ်လုံးသိုလှောင်ခြင်းနှင့် ၀ ယ်ယူသောအခါတွင်ပြန့်ပွားမှုပမာဏအကြောင်းပြောခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မှတ်မိလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်ရေရှည်တွင်အကျိုးအမြတ်ရရှိရန်အလွန်ခက်ခဲစေမည့်တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်ရေးအခကြေးငွေဖြစ်သည်။
သမားရိုးကျ စတော့ရှယ်ယာ CFD များကိစ္စတွင်၊ သင်သည် 1 ထက်နည်းသော အခင်းအကျင်းဖြင့် blue-chip ကုမ္ပဏီများကို မကြာခဏ ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ PIP. ထို့အပြင်၊ ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုထားသောစတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးဆိုဒ်အများစုသည်သင့်အားကော်မရှင်အခမဲ့အခြေခံဖြင့်ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်သည် - ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သင်ပေးဆောင်သောပျံ့နှံ့မှုသာဖြစ်သည်။
သင်တစ်ပြားတစ်ပြားကို CFD ပွဲစားတစ် ဦး ၌အရောင်းအဝယ်လုပ်သောအခါချောမွေ့သောသိုက်နှင့်ထုတ်ယူခြင်းဖြစ်စဉ်မှသင်အကျိုးခံစားရမည်။ ပလက်ဖောင်းအများစုသည်သင်၏အကောင့်ကိုနေ့စဉ်ငွေထုတ် / အကြွေးကဒ် (သို့) ဘဏ်အကောင့်ဖြင့်ရန်ပုံငွေပေးသည်။ အချို့က e-wallets များကိုပင်ထောက်ပံ့ကြသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ထဲမှအပြင်သို့ ၀ င်ငွေကိုလွယ်ကူစွာရရှိစေသည်။
အကောင်းဆုံး Penny စတော့အိတ်ထရေးဒင်းပလက်ဖောင်း 2022
ဒီတော့အခုသင်ဘယ်လောက်ရနိုင်လဲဆိုတာ၏အတွင်းနှင့်အပြင်ကိုသိပြီ စတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ် အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ အခု ၂၀၂၁ ရဲ့ထိပ်တန်းပွဲစားများရွေးခြယ်မှုတချို့အကြောင်းဆွေးနွေးတော့မယ်။ သတိပြုပါ။ အောက်ဖော်ပြပါပွဲစားများသည် SEC ၏တစ်ပြားတစ်ချပ်ရှယ်ယာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်ရှယ်ယာစျေးနှုန်း ၅ ဒေါ်လာအောက်သာရှိသောကုမ္ပဏီများကိုစာရင်းပြုသည်။
၄။ AVATrade - Tight Spreads နှင့်အတူပွဲစားတည်ထောင်ခဲ့သည်
AVATrade သည်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကူးစက်ပျံ့နှံ့စေသည့်ပွဲစားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သင်၌အစုရှယ်ယာများအပါအဝင်ထောင်နှင့်ချီသော CFD များကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။ ပလက်ဖောင်းသည် MT4 ကိုထောက်ပံ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်သင်၏အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်မှုစက်ရုပ်များတပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
AVATrade တွင်အနည်းဆုံးအပ်ငွေပမာဏအနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁၀၀ သာရှိပြီး၎င်းသည်ငွေဒက်ကတ်သို့မဟုတ်အကြွေး ၀ ယ်ကဒ်သို့မဟုတ်ဘဏ်ငွေပမာဏဖြင့်လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ AVATrade သည်အလွန်ကြီးစွာစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားပြီး၊
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော်တစ်ပြားမှကုန်သွယ်မှုသည်လိမ်လည်မှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငွေရေးကြေးရေးကဏ္in၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အလွန်နည်းပါးသောငွေပမာဏများ၊ ငွေညှစ်မှုပြန့်ပွားမှုနှင့်တောရိုင်းအနောက်အနောက်စိတ်ဓာတ်မျိုးစုံဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကြိုးစားသင့်မသင့်ကိုသင်မေးမြန်းရန်လိုသည်။ တကယ်တော့၊ သင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်ပင် OTC ဈေးသို့ဝင်ရောက်ရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ရှိသည်။ အဲဒီအစား, သင်က third-party ပွဲစားမှတဆင့်သွားကြဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရာ CFD စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။ ဤသည်ကသင့်အားအလွန်တင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသောဂေဟစနစ်ရှိခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လျှင်ထောင်နှင့်ချီသောကုမ္ပဏီများအားသင့်အားခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အရေးကြီးသည်မှာသင်သည်တစ်နေ့တည်းတွင်တန်ဖိုး ၉၀% ဆုံးရှုံးနိုင်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမရောင်းဝယ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏အွန်လိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုးပမ်းမှုများကိုအောင်မြင်စေရန် ပို၍ ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းရှိသည်။
Securities and Exchange Commission (SEC) ၏အဆိုအရ - တစ်ပြားတစ်ပြားကိုအများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအစုရှယ်ယာစျေးနှုန်းမှာ ၅ ဒေါ်လာအောက်သာရှိသည်။
Penny စတော့များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် Pink Sheets နှင့် OTC Bulletin Board စသည့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောစျေးကွက်များတွင်ကုန်သွယ်လေ့ရှိသည်။ ဤအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုများကိုလက်လီကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်ရယူရန်ခက်ခဲသည်၊ ထို့ကြောင့် third-party ပွဲစားကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
တစ်ပြားတစ်စတော့ရှယ်ယာ '' စုပ်စက်နှင့်အမှိုက်ပုံ '' ကဘာလဲ?
ပဲန်နီစတော့ရှယ်ယာပန့်များနှင့်အမှိုက်ပုံများသည်လူတစ်စုသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းတွင်စုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်စျေးကွက်ကိုကိုင်တွယ်သည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ရှယ်ယာဈေးနှုန်းကိုအတက်အကျမြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ရာဇ ၀ တ်သားများသည်အမြတ်အစွန်းများစွာဖြင့်သူတို့၏အစုရှယ်ယာများကိုရောင်းချကြလိမ့်မည်။
တစ်ပြားမှထိတ်ဖို့ကောင်းတစ် ဦး ကအခြားရွေးချယ်စရာကဘာလဲ?
တစ်ပြားမှတစ်ပါးသိုလှောင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအခြားနည်းလမ်းမှာရိုးရာစတော့အိတ်ချိန်း CFD အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည်။ သငျသညျအပြည့်အဝ - စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပတ်ဝန်းကျင်၌အများပြည်သူမျက်နှာနှင့်အတူပိုကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီများသည်ကုန်သွယ်လိမ့်မည်။
OTC စျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်ပွဲစားတစ်ယောက်ကိုသင်ပထမ ဦး စွာရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသောစတော့ရှယ်ယာတစ်ပြားကိုသင်တွေ့ရှိပြီးသည်နှင့်ပွဲစားသည်သင်၏ကိုယ်စားရှယ်ယာများကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။
တစ်ပြားမှတစ်ပါးသိုလှောင်ခြင်းသည် ၀ ယ်ရန်လွယ်ကူသည်ဟုမကြာခဏဆိုလေ့ရှိသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ရှယ်ယာတွေကိုထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ၀ ယ်သူကိုရှာဖို့အခက်တွေ့နိုင်တယ်။ အရေးကြီးသည်မှာသင်ရွေးချယ်ထားသောပွဲစားသည်သင်၏ကိုယ်စား ၀ ယ်သူကိုရှာရန်လိုအပ်သည်။